CUA : 11 ny zaza raisina ao amin’ny foibe fandraisana vonjimaika | NewsMada
CUA : 11 ny zaza raisina ao amin’ny foibe fandraisana vonjimaika
Sampana iray ao anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra no misahana ny asa sosialy mifandraika amin’ny andavanandron’ny mponina eto an-dRenivohitra. Manana sehatra telo ny sampana ka iray amin’ireny ny toeram-pandraisana vonjimaika (centre d’acceuil d’urgence). Foibe fandraisana ireo ankizy (latsaky ny 18 taona) niharan’ny herisetra izay efa niasa hatramin’ny taona 2003. Mahatratra 11 ny zaza karakaraina ao ankehitriny ary misy mbola madinika mihitsy satria 3 taona monja. « Vokatry ny tranga maro no mahatonga azy ireo mijanona ao amin’ny foibe », araka ny fanazavan’ny lehiben’ny sampandraharaha misahana ny ankohonana sy ny ankizy, Tolotra Nomenjanahary Francia, omaly. Misy ireo very, voaolana, niala ny tokantranon’ny ray aman-dreny, ankizy niasa an-trano niharan’ny herisetra avy amin’ny mpampiasa azy… Avy any Antsirabe, Farafangana, Mahitsy, Morondava, Tsiroanomandidy ny toeram-piaviany. 10 andro ny faharetan’ny fijanonany ao amin’ny foibe satria 15 ihany no zakan’ny fotodrafitrasa misy. Miankina amin’ny fizotry ny famerenana azy ireo eny anivon’ny fiarahamonina koa indraindray izany. Matory sy misakafo ao amin’ny foibe izy ireo.
Misahana ny fikarakarana ny renin-jaza efatra miasa andro sy alina mifandimby. Miara-miasa amin’ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny mpitsara ankizy ny foibe, didy avy amin’ny fitsarana no ametrahana ny zaza ao, toy izay koa ny fialany ao hifindrany toerana. Amin’ny ankapobeny, alefa eny amin’ny toeram-pandraisana ankizy sahirana na kamboty na tsy misy mpiahy ireo tsy afaka niverina any amin’ny fianakaviany.
Ho an’ireo zaza very, alefa amin’ny fandaharana amin’ny fahitalavitra, Ombay mitady, ny fiantsoana izay fianakaviany rehefa tsy misy olona mitady izy ireo, aorian’ny 15 andro nahatongavany teo amin’ny foibe.